Ogaden News Agency (ONA) – Hogaanka Arimaha Dibadda oo ka qaybgalay Shir balaadhan oo lagu qabtay Perth/Australia
Hogaanka Arimaha Dibadda oo ka qaybgalay Shir balaadhan oo lagu qabtay Perth/Australia
Shir aad loo soo agaasimay oo mudoba laga shintirinayay ayaa lagu qabtay maanta oo ay taariikhdu tahay 18/03/12 galbeedka Australia, Magalada Perth. Shirkaas oo uu kaqayb galay Hogaanka Arimaha Dibadda ee JWXO Dr Cabdiraxman Maxamed sheekh Mahdi (Madey) oo baryahanba ku joogay booqasho shaqo wadanka Australia.
Shirkan oo ay kasoo qaybgaleen dhamaan ururada bulshada S.Ogadenia iyo wilibba somaliweynta kudhaqan magalada Perth ayaa wuxuu ahaa shir aan lookala hadhin oo jaaliyadda Perth ay si fiican u soo agaasimeen.
Shirka oo bilawday abaarihii 4:30 galabnimo waqtiga Perth ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay xamaasad iyo shucuur aad ubalaadhan markay soo galeen madashii shirka madaxdii JWXO oo uu horkacayay Dr Madey iyo masuulintii ururka ee la socotay oo uu ka mid ahaa mudane Cadaan Hirmooge. Soo dhaweyntii iyo xamaasadii kadib ayaa waxaa laguda galay hawlihii shirka oo markii oogu horaysayba lagu furay ayaadaha quraanka kariimka, kadibna waxaa lagu soo dhawayey fadiilatu sheekh Cabdiqadir Cali gurey oo kasoo jeediyay wacdi iyo waano aad u badashay dadkii joogay madashii shirka. Wacdiga sheekh Cabdiqadir ayaa ahayd mid uu ku baraarujinayay shacabka S.Ogadenia in ay iska dulqaadan dulmiga lagu hayo iyo duliga gumaysiga oy garab istaagaan halganka xaqa ah ee kasocda Ogadenia.
Kadib waxaa lagu soo dhaweeyay microfoonka Gudoomiyaha Jaaliyada S.Ogadenia ee Galbeedka Australia Mudane Axmed Dalmar oo ka warbixiyay waxqabadka jaaliyada isagoo tilmaamay in ay jaaliydani u taagantahay garab istaaga halganka lagu xoraynayo Ogadenia isla markaana aysan ka seexanin habeen iyo maalinba hawlaha lagu horumarinayo qadiyadda shacabka Ogadenya. Wuxuu sheegay jaaliyadani in ay soo martay marxalado kala gadisan balse maanta ay taagantahay heer aad iyo aad loogu farxo isagoo sheegay in dhamaan hawlwadeenada jaaliyadu ay u shaqeeyaan sidii loogu talagalay.
Kadib waxaa lagu soo dhawayey microfoonka xoghaynta guud ee OYSU Mudane Jamal Ugaas Xukun isaga oo ka warbixiyay xaalada guud ee ururka Dhalinyarada iyo Ardayda S.Ogadenia islamarkaan sheegay sababihii loo mideeyay dhalinyarada oo labo sano kahor ahaan jiray ururo badan oo aan xidhiidh fiican uusan ka dhaxeenin. Wuxuu hoosta ka xariiqay in markii xooga iyo maskaxda da’yarta S.Ogadenia la mideeyay ay muuqato waxqabadkoodii dhamaanba shanta qaaradood ayna balan qaadeen in ay keenaan majlisyada caalamka xasuuqa uu kuhayo gumaysigu shacabka Ogadenia.
Waxaa kale oo lagu soo dhawayay madasha Abwanada weyn ee Rooda Ibrahim (Af Jano) oo so jeedisay hadal aad iyo aad loogu qiirooday kaas oo tabanayay kalinta dumarka ay ooga jiraan halganka shacabka S.Ogadenia isla markaana ka hadashay dhibka uu gumaysigu ku hayo dumarka S.Ogadenia iyo sida ay ugu dhabar adeegayn dhibka uu gumaysigu ku hayo. Waxay sheegtay oo kale in ayna dumarka S.Ogadenia looga xusin malinta dumarka aduunka laga xuso balse iyagu ku jiraan murogo uu baday gumaysigu kaas oo isugu jira jidh dil aan loo aabo yeelin, kufsi, dhac, barakicin iyo igaya oo ragoodii lagu hor laayo iyo wiilashii ay dhaleen calamkuna ilobay bahalnimadaa gumaysigaa.
Inta kadib waxaa kahadlay oday dhaqameedyo halkaas ka soo jeediyay erayo gubaabo iyo dardaaran iyo fariin isugu wada jira iyo waliba abwaan Gaboose oo gabay aad loogu bogay ka tiriyay madasha.Intaas kadib ayaa waxaa lagalay hadafkii shirka oo ahaa in laga dhagaysto hogaanka arimaha dibada JWXO mudane Dr Cabdiraxman Maxamed Sheekh Mahdi (Madey) oo markii lagu soo dhaweeyay ay dhamaan dadkii fadhiyay ay sawaxan iyo sacab la wada iistaageen. Mudane C/raxmaan Madey ayaa dadkii ooga mahad celiyay sida sharafta iyo karaamada leh ee ay oogu soo dhawayeen magaalada Perth iyo goobta shirkaba.
Cabdiraxman Madey oo mudo aad u dheer kusoo jiray halganka isla marhaantaana kamid ah aas aasayaashii ururka ONLF ayaa hadalkiisii ku bilaabay siyaasada iyo hadafka ururka ONLF. Waxa uu sheegay in uu halgankani marayo meel aad u wanaagsan dhan ciidan iyo siyaasadba, lagagana guulaystay maxaysatada Wayanaha goobaha dagaalka. Waxa uu si qoto dheer ooga warbixiyay heerka siyaasadeed ee caalamka ay ka marayso Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia hady noqon laheed Europe, America, Afrikaba iyo wiliba Bariga-dhexe. Hadii ay Itoobiya awal ay iyadu u yeedhin jirtay caalamka arimaha geeska Afrika ayna maanta arintu sidaas ahayn meel walbana aanu cadeynay xasuuqa iyo genocide-ka uu kawada gumaysiga dhulka Ogadenia.
Waxa Dr Madey uu aad oogu dheeraaday cadawga kali ah ay leedahay S.Ogadenia iyo Somali weynba uu yahay Itoobiya caalamkana kasoo baryootanta lacag gaaraysa $22 Billion, lacagtaas oo ay u isticmaasho siday oogu gumaadi laheed qoomiyadaha kale ee ku dhaaqan Itoobiya. Waxaa uu mudane Madey cadeyay in ay tahay Itoobiya dawlada oogu faqiirsan caalamka ayna ku dhaqanyihiin dad gaaraya 80 million sida ay sheegtaan kuwaas oo ka faqri ah xagga dhaqanka, xoolaha iyo dhulka, waxayna damacsanyihiin inay u soo boob tago dhulka somalidu ay dagan tahay iyagoo biyo xireeno ka seemeyn doona say u soo dajiyaan dadkooda buuraha saaran dhulga S.Ogadenia.
Waxa kale oo Dr Maadeey sheegay in gumaysiga madoow ee Itoobiya u soo haqal taagayso macdanta iyo khayraadka dabiiciga ah ee ku jira Ogadenia sida Jeexdin oo u jirta Hobyo 400 Km oy doonayaan inay halkaas ka dhoofsadaan shidaalka balse wuxuu taas ku tilmaamay arin aanan marnaba suura gali dooninoo JWXO aanay sinaba u ogalaan doonin.
Waxa kale oo uu mudane Madeey kahadlay arimaha Somaliya asaga oo tilmaamay in ay shacabka Somaliyed yihiin shacab walaaladanada ah oo aanu nahay dad Somalinimada ku faana isla mar ahaanataana Somalinimaduna kasoo abuurantay Ogadenia oo aanan marnaba ogalaan doonin maamulada dabadhilif ka ee ushaqeeya gumaysatada Itoobiya in ay isku kaana dhuftaan anaga iyo shacabka walaaladanada ah.
Isku soo wada duuduuboo, shirkan ayaa ahaa shir warbixino kala duwan lagaga soo jeediyay suaalo badana lagu waydiiyay masuuliyiintii jwxo ee meesha fadhiday ee uu kamid ahaa Dr cabdiraxmaan Madey iyo mudane Cabdiqadir sheekh Xasan Biixi Hirmooge kuna dhamaaday jawi farxad iyo reereen leh.
Wixii kasoo kordha safarka shaqo uu Madey kujoogo Australia kala soco shabakada Ogaden News Agency.